५.८ इन्चको ओएलइडी डिस्प्लेसहित आइफोन ८ सार्वजनिक हुने ! - Living with ICT
Home / Featured / ५.८ इन्चको ओएलइडी डिस्प्लेसहित आइफोन ८ सार्वजनिक हुने !
५.८ इन्चको ओएलइडी डिस्प्लेसहित आइफोन ८ सार्वजनिक हुने !
Shiva Basnet Mar 8, 2017	Leaveacomment
आइफोन ८ कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? के के विशेषता हुन्छन् ? मूल्य कति हुन्छ ? यी प्रश्नहरु आइफोन ७ लञ्च हुनेबित्तिकै गर्न थालिएको हो । विभिन्न स्रोतले आइफोन ८ एप्पलको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सेप्टेम्बरमा लञ्च हुने बताइरहेका छन् । कम्पनीले तीनवटा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने चर्चा बाहिर आएको छ । यसमध्ये ५.८ इन्चको ओएलईडी डिस्प्लेसहित सार्वजनिक हुने भनिएकाे अाइफाेन ८ बारे विशेष चर्चा भइरहेकाे छ । साथै आइफोन सेभेन एस तथा सेभेन एस प्लस पनि सार्वजनिक हुँदैछ ।
कम्पनीले आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिपको नाम आइफोन एक्स राख्ने विभिन्न जानकारीहरु आएका छन् । योसँगै केही आकर्षक फिचरहरुसहित आउन लागेको समाचार पनि आइरहेको छ । ए ११ चिप, ५.८ इनचको ओएलइडी डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिङ लगायतका आमूल परिवर्तनसहितका टेक्नोलोजी आइफोन ८ मा पाउन सकिने जनाइएको छ । यसको अर्थ आइफोन ८ मा अहिलेसम्मका आइफोनमा मात्रै नभर्इ हाल बजारमा रहेका आम स्मार्टफोनभन्दा उल्लेख्य रुपमा ठूलो हुनेछ ।
आइफोन ८ धेरै ठूलो हुने भो भनेर चिन्ता लिनेहरुका लागि सुखद खबर के छ भने एप्पलले माथिल्लो र तल्लो भागहरुलाई छाँटेर यसलाई आइफोन ७ प्लसभन्दा सानो बनाउनेछ । तर, यसको मूल्य भने अहिलेसम्म बजारमा ल्याएकोमध्येकै सबैभन्दा महंगो अर्थात् एक हजार डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार आइफोन ८ मा ५.८ इन्च डिस्प्ले रहनेछ तर, ५.१५ इन्च मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
Previous ‘५एक्स डुअल क्यामेरा जुम’ प्रविधिका लागि विभिन्न अवार्डद्वारा ओप्पो सम्मानित
Next ओप्पोले २०+८ मेगापिक्सलको डुअल फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने